सलमानले छाडेपछि भन्सालीको ‘इन्शाअल्लाह’ मा शाहरुख ! « Naya Page
सलमानले छाडेपछि भन्सालीको ‘इन्शाअल्लाह’ मा शाहरुख !
प्रकाशित मिति : 30 August, 2019 4:34 pm
काठमाडौं, १३ भदौं । बलिउडका भेट्रान निर्देशक सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्म ‘इन्शाअल्लाह’ मा अभिनेता सलमान खानले अभिनेत्री आलिया भट्टसँग रोमान्स गर्ने निश्चित भएको थियो ।
सेप्टेम्बर अन्तिमबाट छायांकनमा जाने तयारी भइरहँदा आन्तरिक मनमुटावका कारण २० वर्षपछि हुन लागेको भन्साली र सलमानको टिमअप टुटेको छ । तत्कालका लागि यो फिल्मको निर्माण स्थगित भएको छ ।
यसबीच, ‘इन्शाअल्लाह’ बाट सलमानले हात झिकेको खबर बाहिरिएको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार, यो फिल्ममा अभिनेता शाहरुख खानको प्रवेश भएको छ । हालै सलमानले एक ट्वीटमार्फत् फिल्म बन्न ढिलाई भएको बताएका थिए । विभिन्न कुरामा असहमति उत्पन्न भएपछि सलमान र भन्सालीबीचको सहकार्य टुटेको बताइएको छ । फिल्ममा आलिया भने यथावत छिन् ।
सलमानले फिल्म छाडेपछि निर्देशक भन्सालीले शाहरुखलाई लिड रोलमा अप्रोच गरेका थिए । आईबी टाइम्स इन्डियाका अनुसार, भन्सालीले चाँडै फिल्ममा शाहरुख अनुबन्ध भएको घोषणा गर्न सक्नेछन् । इन्टरटेनमेन्ट पत्रकार उमैर सन्धूले शाहरुखको प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीजलाई उद्धित गर्दै भन्सालीले फिल्ममा शाहरुखलाई साइन गरेको बताएका छन् ।
शाहरुख खान र सञ्जय लीला भन्सालीबीच फिल्म ‘देवदास’ मा सहकार्य भएको थियो । ‘इन्शाअल्लाह’ भन्दा अगाडि शाहरुखसँग भन्सालीले फिल्म ‘इजहार’ का लागि पनि कुरा गरेका थिए । यो फिल्म गर्ने विषयमा दुईबीच लगभग मोटामोटी सहमति भइसकेको छ । तर, योभन्दा अगाडि भन्सालीले ‘इन्शाअल्लाह’ बनाउने छन् । किनकी यसको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ ।
बलिउड गायिका कनिकाको पाँचौंपल्टको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
संकटमा साहरुखको सहयोग : क्वारेन्टाइन बनाउन दिए चार तले आफ्नै कार्यालय
हल खुल्ने छाँट नभएपछि निर्माताको रोजाइ युट्युब